Tsidi-bohitra : raikitra ny fitaingenana lakana | NewsMada
Mampitaintaina saingy mahafinaritra ny « rafting » na ny fitaingenana lakana amin’ny ranomahery, iray amin’ireo fomba fitsidiham-bohitra karakarain’ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana), indroa isam-bolana. Manaporofo izany ny fahamaroan’ny mpandray anjara isaky ny misy ity hetsika ity.
Raikitra indray àry ny fidinana ny reniranon’i Katsaoka, manomboka eo amin’ny 20km, manaraka iny lalam-pirenena voalohany iny, ny asabotsy izao. Haharitra ora roa izany, izany hoe, kendrena hifaranana eo amin’ny tanànan’i Tsaratanàna. Marihina fa misy olona efa za-draharaha sy matihanina amin’ny « rafting » ao amin’ny lakana tsirairay.
Sady fanatanjahantena no fialamboly ity hetsika ity. Na izany aza, mitoetra hatrany ny fampahafantarana ny tantara sy ny kolontsaina, hatramin’izay rehetra mampalaza ireo toerana lalovana. Hotohizana mandritra ny dia an-tongotra, manomboka eo Tsaratanàna hatreny Ambatomirahavavy, izany.
Mampiavaka ity tsidi-bohitra ity ny fiarahan’ny mpandray anjara rehetra mamboly hazo, ao amin’ny EPP Antanety, ao Katsaoka ihany. Tsy vao izao akory no miara-dalana amin’ny tsidi-bohitra ny fanaporofoana ny fandraisana andraikitra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana fa efa fanaon’ny Ortana isan-taona.